Seranam-piaramanidina vaovao any Istanbul: mirehitra ny jiro fihodinana!
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Seranam-piaramanidina vaovao any Istanbul: mirehitra ny jiro fihodinana!
Voamarina ny fanamboarana ny lalamby voalohany ary nirehitra ny jiro tao amin'ny lalamby voalohany amin'ny seranam-piaramanidina New Istanbul, tetik'asa lehibe indrindra eran-tany namboarina hatramin'ny voalohany. Ny fihazakazahana voalohany, 3,750 m ny halavany ary 60 m ny sakany, dia vonona hihazo sy hiainga.
Ny valopolo isanjaton'ny dingana voalohany dia vita ao amin'ny New Airport Istanbul. Eo imason'ny besinimaro manerantany ny tetikasa alohan'ny hisokafany ny 29 Oktobra 2018. Amin'ireo làlambe telo tsy miankina mandrindra izay natao ho ampahany amin'ny dingana voalohany, ny làlambe no. Ny 1 amin'ny 3,750 60 m ny halavany ary ny sakany 34,183 m dia vita farany sy nodorana voalohany. Ny làlambe, efa namboarina ho an'ny sidina ankehitriny, dia misy ny jiro LED XNUMX. Ny rafitry ny jiro dia natao hanarahana ny fenitra iraisampirenena ary napetraka amin'ny fiainganana sy fiantsonana azo antoka.
Yusuf Akçayoğlu, Tale jeneralin'ny fananganana seranam-piaramanidina IGA, nanamarika fa ny seranam-piaramanidin'i Istanbul Vaovao dia hisolo tena an'i Torkia sy ny olony manao ny rariny amin'ny lanjan'ny fizahan-tany sy ny mety ho varotra ao amin'ny firenena, ary nitohy toy izao: Ny fahavitan'ny dingana voalohany dia manakaiky kokoa isaky ny metatra toradroa naorina. Vao avy nahavita ny rafitry ny entana izahay, izay ivon'ny seranam-piaramanidintsika. Ary ankehitriny izahay dia nanao ny lalam-pirenena voalohany ho amin'ny fipetrahana miaraka amin'ny fitaovana ilaina rehetra ary mifanaraka amin'ny fenitra manerantany mifandraika amin'izany. Manantena ny hitondra ny seranam-piaramanidina Istanbul manontolo izahay amin'ny 29 Oktobra 2018. ”
Ny Seranam-piaramanidin'i Istanbul Vaovao dia vonona hanompo kaompaniam-pitaterana 100 eo ho eo ary ho lasa tobin'ny fiaramanidina vaovao misy toeran-kaleha 350 amin'ny fitaterana mpandeha sy fitaterana entana manerantany. Ny dingana voalohany miaraka amin'ny fahaizan'ny mpandeha 90 tapitrisa dia hotendrena amin'ny làlambe telo mifanila tsy miankina, zotram-pivarotana, tranobe misy terminal, tranobe fanaraha-maso ny fifamoivoizana an'habakabaka, rafitra fifandraisana sy toetr'andro ary koa tranobe ilaina hafa.